The Good Life Encwadi — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
"Kwaphela iminyaka, Bengilokhu ukwenza umculo inselele zethu imibono yezwe futhi amaphuzu kuKristu – kodwa bebelokhu bekhona kulinganiselwe umculo, ngoba kukhona kuphela ongakusho ukuxhumana in a song,"Kusho Trip. "I-albhamu wafundisa izilaleli izifinyezo impilo enhle, futhi le ncwadi iyoba more like a manual kanjani ukuba siphile ngayo. Ngithathe ngithandaza ukuthi le ncwadi kuyosiza umfundi ukuba bafulathele amanga futhi siphile ngendlela sadalwa ukuba aphile. "
Ngokusebenzisa baqinisekiswa mathupha ukuphila kwakhe, Trip iveze amanga okuye utshele, futhi uveza entsha, isithombe kweBhayibheli ngokuphila okuhle. Ukuhlola zonke zokuphila kuhlanganise injabulo, impumelelo, and morality in light of God’s truth The Good Ukuphila redefines the term as not living to please yourself but living by faith in a good God.
"Ukuphila ezinhle hhayi sikhuphuka phezulu isitebhisi corporate, impilo enhle akuyona ukuphila okukhululekile kuyo noma yimuphi umthwalo,"Kusho Trip. "Ukuphila okuhle ophila ukuvumelanisa noNkulunkulu kanye nokwamukela konke kufanele anikele kithi kuKristu."
Ayikho elisha yobuKristu umculo scene, DEBUT albhamu Trip sika, Uma they yodwa azi!, hit stores nationwide a few days after his high school graduation. That same year, Naye nengxenye Dove Award-eliphakanyiswe, Classic ezingaphelelwa isikhathi "UJesu Muzik" nge ilebula umngane womshado Lecrae. Sophomore albhamu Trip sika,20/20, wadedelwa ngo 2008 futhi lakwazi baba nempumelelo enkulu: ukugqekeza Billboard Top 200, ekufinyeleleni #11 on the Billboard yobuKristu albhamu ishadi kokwehla at #4 etjhadini Gospel. With studio albhamu yakhe yesithathu, Between emihlabeni emibili, Trip offered a collection of reflections on life in a fallen world. Those reflections resonated with listeners as B2W debuted at #1 on the Christian futhi Gospel Billboard amashadi, #5 on the Hip Hop / Rap iTunes ishadi #9 on the Top Albums iTunes ishadi. I-albhamu futhi wathola ukuthi kuqokwe abantu ababili Dove kanye Stellar Award for Best Gospel Ukwahlanganiswa / Hip Hop Album of the Year.
zakamuva albhamu release Trip sika, The Good Life wangenela at #2 kokubili jikelele kanye Hip Hop iTunes amashadi ngenkathi ngamavoti the #3 isikhundla eshadini Hip Hop Billboard sika, kokufika #17 on the Top 200 ishadi Billboard wathatha #1 slot eshadini yobuKristu futhi Gospel Billboard.
Trip uye wahambela izwe lenza for izinkulungwane zezilaleli. In conjunction with The Good Life, Trip is currently on a promotional nationwide tour and will be a featured labaculi ahlukahlukene 2012 imikhosi kuhlanganise Spirit West Coast, Atlanta Fest futhi Rock The Lakes, phakathi kwabanye.
Mayelana Moody Publishers
Kwaphela iminyaka engaphezu 115 iminyaka, Moody Abashicileli iye yanyathelisa unokwethenjelwa, substantive material that focuses on the most important issues in life. They continue to meet the needs of a growing and changing marketplace with products of the highest quality, ngokusebenzisa izincwadi ezinyathelisiwe ngokwesiko, ngokusebenzisa audio kanye video imikhiqizo, and now through e-books for select electronic readers. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, please visit http://www.moodypublishers.com/.
Mayelana Reach Records and ReachLife Ministries
Sifinyelele Records and ReachLife Ministries silwele ukuba, "Ekuvaleni igebe elikhona phakathi iqiniso waseBhayibhelini kanye nesimongcondvo yasemadolobheni." Wasekelwa e 2003, Reach Records umKristu umculo yokurekhoda esizinikezele usebenzisa umculo njengendlela yokuthola yokufinyelela emphakathini omkhulu ezisemadolobheni ngendlela eBhayibhelini umsindo. Nakuba Reach Amarekhodi iqasha umculo ukuveza iqiniso waseBhayibhelini, ReachLife Ministries aims to empower ministry leaders with this music in order to grow the urban church.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kanye nohlu oluzayo Reach Records and ReachLife Ministries nemicimbi, please visit http://reachrecords.com. For more information about ReachLife please visit http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • August 19, 2013 at 8:51 am • Phendula
Michael Glaze • August 19, 2013 at 8:52 am • Phendula